Uma une ekhaya iholidi noma cottage, cishe ndawonye nawe kuyoba khona umngane othembekile kunazo yomuntu ephakathini lakhe esongelayo - inja. Lokhu kusho ukuthi i-psinka kumele kube ikhaya elifudumele, ukhululekile futhi emuhle. Indlela elula ukwakha indlu yenja ngoba inja wena.
Okokuqala, kufanele uthole ukuthi ubukhulu yendlu inja. Akumele ube mkhulu kakhulu, ngoba ngaleso sikhathi doggie kuyoba abandayo lapho emakhazeni. Kodwa indlu incane kakhulu kungaba esingesihle kakhulu. Wamadokodo izinja ngezandla kumele athobele isilwane esithile. Ngakho-ke proizvedom ezinye izilinganiso futhi izibalo.
Ububanzi mgodi kulula ukunquma ngu Ukumeda ububanzi bekumba esifubeni sesilwane sakho nokukhuphula usayizi 8 cm. Ukuphakama manway ibalwa ngokukhipha 5 cm kusukela isilwane ukuphakama ubukhulu ihlombe. Manje ulinganise umngane zemilenze emine, njengoba besho, kusukela esihlokweni selinye ekhaleni kuya komsila - lokhu kuzoba ububanzi ikhaya Canine. Ukuphakama inja sifana nokuphakama nokujula we isithumbanja.
Ukuze idokodo lalinethezeke futhi efudumele inja ngezandla zakho, sebenzisa umuthi softwood asezindongeni aseRama ikhulu namashumi ikhulu, izinkulungwane eziyikhulu namashumi amane mahlanu ezingamashumi amane. Zisebenziseke decking ibhodi phansi, emaceleni emihle noma izihloko eziyize, ngamanye amagama - a plinth ewumngcingo izinhlangothi zazo ziyalingana. Kodwa ubuhle, sidinga cornices zokuhlobisa. Ungakhohlwa ukulungiselela flooring ipulangwe, ukufulela impahla ophahleni futhi ukwahlukanisa. Ukuze kunenze nisondelane futhi izinzipho efanelekayo lashukumisa nge hat kancane. Fine, uma wenza ngeke Impregnation "Senezh" noma "Pinotex", okuyinto ukuvimbela ukubukeka isikhunta phezu kwesihlahla.
Ngakho indlela yokwenza isithumbanja inja womnikazi ngamunye ufuna ukhululekile, ophahleni kudingekile ukunikeza esikhiphekayo. Lokhu kwenziwa ukuze ukwazi ecoca egumbini nokuthuthwa kwendle, kanye uma izifo inja. Ukuze hhayi ukulimaza le isilwane esigulayo wasiphula ayefihlwe wakhe endaweni, lapho ngokuvamile zazifihlwa ngaphansi kophahla esikhiphekayo Vết kulula kakhulu ukukhiqiza zokukhwabanisa zokwelapha.
Kufanele futhi unakekele ukuthi idokodo ukuze inja, enziwe ngezandla zakhe, waba phansi evuthayo. Ngakho-ke, kungcono ukwenza double. Ngaphezu kwalokho, kufanele kahle sanded futhi unakekele ukungalokothi wanamathela ichopho izipikili. Yebo, nezigqoko, njengoba kushiwo ngenhla, kufanele abe mancane futhi kwakungeke wayehlukile phansi nezindonga Doggie ayikwazanga ubuhlungu.
Ngemvume noma imbobo isithumbanja kungcono ukuba phakathi odongeni, icala langasezantsi libe - ngakho inja ukuzifihla umoya. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuhlelwe uhlangothi olude ye-tafula. Wamadokodo izinja ngezandla kufanele ibe iphuzu esiphezulu egcekeni, ukuze ngesikhathi amanzi emvula kungaqali ndikindiki ngaphakathi, kodwa kunalokho, i-phansi udoti.
Ukuze uqale umsebenzi endlini inja ezihamba phambili kusukela phansi, okusho ke kudingeka uxhume komzila ohlangothini. Khona-ke kuyomelwe ukugcwalisa ibhodi, olungiselwe izindonga. Ngesikhathi kokuhlinzwa, kufanele ziqashwe eduze ukuqinisekisa ukuthi yokubeka lokhuni ibekwe ngenhla. Wamadokodo izinja ngezandla zabo liyoqina uqine, uma umninindlu ngeke uzibe imithetho eyisisekelo ukwakhiwa of the yokukhosela inja.
Ngemva izindonga ezakhiwa isithumbanja, kahle banakekele ukwahlukanisa yabo. Ngokuphelele efanelekayo le Foam umsebenzi. Nakuba ungasebenzisa amanye ama-heater, okuyinto ngihlalé kusukela ukwahlukanisa angaphansi ezindlu zabo eziyizitezi. Khona-ke ungakwazi banakekele design Ingaphandle yendlu. Kumi esiqongweni sezindawo idokodo kumele kube clapboard sheathe.
Abanye abanikazi emgodini thunga ucezu iraba elithambile, isibonelo, ukhaphethi ubudala aphume endlini lencane. Smart inja ngokushesha okukhulu kahle amakhono ukusebenzisa lolu hlobo umnyango. Kodwa kungcono ukunamathisela kwesikhashana, lapho isilwane Ufika esetshenziswa ekhaya lakhe elisha.
Indlela yokwenza okugeza for dolls. Amathiphu ezingokoqobo nemibono
Popular azakhele injini umshini wokuwasha
Indlela yokwenza umnyango ebhokisini bese uyifake wena
Isitofu umshini ngezandla zakhe.
Gazebo Pallets ngezandla
Indlela mhlophe amathe amateki ekhaya?
Izimpawu zamazwe omhlaba: incazelo
Prince Oberin e ifilimu "Game of Thrones": umlingisi izici futhi amaqiniso athakazelisayo
Amasayizi ethandwa iningi rhinestones
Tablets "Likopid": analogs futhi impendulo kuyo
Linguistics. Unkamisa umsindo, ngezigaba yonkamisa
Tunisian boxer professional Yang Viktor Perez biography, izimpumelelo amaqiniso athakazelisayo
"Svyaz-Bank":-Google + futhi abasebenzi
Amakhadi esikweletu eSberbank: kanjani ukusebenzisa leli thuba
Ukuvala inaliti izihibe: inqubo incazelo
Kungenzeka kanjani ukulawula izindleko MTS?
Top ukushibilika eqhweni imaski ngokuba ubuso Sibutsetelo izinhlobo, abakhiqizi kanye nokubuyekeza